Agate 'canate' waa magac ganacsi, kuwani runtii waa botryoidal chalcedony - muuqaal
Agate 'canate' waa magac ganacsi, kuwani runtii waa botryoidal chalcedony. Botryoidal macnaheedu waa wareegyo yaryar oo wareegsan oo qaab dabiici ah isu samaysteen.
Dareenka botryoidal ama caado macdanta ayaa ah midka ay macdantu leedahay qaab dibadda ah oo u eg kan duug ah oo canab ah. Tani waa qaab caan u ah macdano badan, gaar ahaan hematite, qaabka guud ahaan loo aqoonsan yahay. Sidoo kale waa nooc caan ah oo ah goethite, smithsonite, fluorite iyo malachite. Tan waxaa ku jira chrysocolla.
Dhul kasta ama canab ku jira macdanta botryoidal waa mid ka yar tan macdanta reniform, waana aad uga yar tahay tan macdanta naaska. Macdanta Botryoidal waxay sameysmaan markii ay jiraan nuujinno badan oo u dhow, boodh ciid, boodh, ama walxaha kale, ayaa jira. Qaylada kiciya ama guntinku waxay si firfircoon ugu koraan si isku xigxiga qaddarka nuclei isla heerkaas, oo u muuqda iskeel kale. Ugu dambayntii, xawaareyaashu waa ay la yaabaan ama is dulsaaraan kuwa u dhow. Meelahan ku dhawaa dhow ayaa markaa la isugu keenayaa si ay u sameeyaan buugga botryoidal.
Agate canab - Botryoidal guduudan chalcedony quartz
Chalcedony waa qaab loo yaqaan 'cryptocrystalline qaab silica', oo ka kooban iskudhacyo aad u fiican oo ah 'quartz iyo moganite'. Kuwani waa labadaba macdanta "silica", laakiin way ku kala duwan yihiin in quartz uu leeyahay qaab dhismeedka kristalional, halka moganite uu yahay monoclinic. Qaab dhismeedka kiimikada ee Chalcedony waa SiO₂.
Canab macangag ah
Agate canabku wuxuu horumariyaa xasilloonida gudaha, xasilloonida, iyo qaan gaadhnimada. Qalabeheeda diiran, ilaalinta waxay dhiirigelisaa amniga iyo isku kalsoonida. Waxay u oggolaaneysaa heerar qoto dheer oo qoto dheer oo waqti yar ah. Agate canab waa khariidadda riyada, dareenka, iyo raaxada.
Canab ayaa ka soo jeeda Indonesia
ka iibso dukaan canab ah oo dabiici ah dukaankeena
Dab iyo agate